I-iROOMZ Trupti International A/c Deluxe Double Room
I-Hotel Trupti International, i-Hubli, yamukela zonke izihambeli eziqaphelayo ngenjongo yokwethula ukuhlala okukhuthazayo. Abahambi bangavakashela. Okunye umuntu angahlola izindawo ezifana neShankar Mutt(1 km), Old Hubli Idgah Maidan(4 km), Urban Oasis Mall(4 km), Nrupatunga Betta(6 km), Unkal Lake(6 km) nezinye eziningi.
I-Hotel Trupti International, i-Hubli, yamukela zonke izihambeli eziqaphelayo ngenjongo yokwethula ukuhlala okukhuthazayo. Inikeza izivakashi indawo yokuhlala enokuthula ezwakala njengekhaya kude nasekhaya. Ukungenisa izihambi okunesisa, indawo yokwamukela izivakashi nezindawo ezibalulekile kuqinisekisa ukuhlala okungenazinkinga. Ihhotela litholakala ebangeni elingamakhilomitha ama-2 ukusuka eHubli Junction kanye namakhilomitha ayi-6 ukusuka esikhumulweni sezindiza saseHubli.
Ihhotela linamakamelo abukekayo, ahlanzekile nahlanzekile alungele ukuphumula komndeni nabangane. Kusebangeni lokuhamba ukusuka eKittur Rani Chennamma Circle kanye ne-Indira Gandhi Glass House abahambi abangayivakashela. Okunye umuntu angahlola izindawo ezifana neShankar Mutt(1 km), Old Hubli Idgah Maidan(4 km), Urban Oasis Mall(4 km), Nrupatunga Betta(6 km), Unkal Lake(6 km) nezinye eziningi.
Iba nokuhlala okujabulisayo e-Hotel Trupti International!
I-Hotel Trupti International, i-Hubli, yamukela zonke izihambeli eziqaphelayo ngenjongo yokwethula ukuhlala okukhuthazayo. Inikeza izivakashi indawo yokuhlala enokuthula ezwakala n…